#Inter Oo Racdeysay Macalin Spalletti waxyar ka hor markii ay usoo baxeen horyalka yurub - Get Latest News From Horn of Africa
#Inter Oo Racdeysay Macalin Spalletti waxyar ka hor markii ay usoo baxeen horyalka yurub
Kooxda Inter Milan ayaa ku dhawaaqday in tababarahooda reer talyaani Luciano Spalletti ay kala qeybsameen isla markaana uu faarujinayo garoonka San Siro Stadium xilli macalinkaan uu laba sano oo xiriir ah u sahlay iney kasoo qeybgalaan koobka Champions League.
Waxaa la hadal hayaa iney kooxda ku badaleyso Antonio Conte oo mar tababare usoo noqday Juventus iyo qaranka Italy, iyadoo la aaminsan yahay in agaasimaha cusub ee koxoda Giuseppe Marotta uu gacan weyn ku leeyahay wax walba oo kooxda ka dhacaya.
Macalinkaan wuxuu ku guuldareystay inuu kasbado qalbiga jamaahiirta kooxda, qaar ka mid ah ciyaartoyda iyo sidoo kale maamulka ugu sarreeya kooxda, waana sababta keentay in lagu dhawaaqo inuu kooxda isaga tagay.
“FC Internazionale Milano waxey xaqiijineysaa inuusan Luciano Spalletti sii ahaan doonin tababaraha kooxda koowaad” ayey u qorneed bayaan yar oo lasoo dhigay twitter-ka.
“Kooxda waxey ug mahad celineysaa Spalletti shaqadii uu qabtay iyo natiijooyinkii aan sida wadajirka ah u gaarnay”
60-jirkaan ayaa yimid San Siro 2017 isagoo kasoo hayaamay Roma, wuxuuna kooxda u hogaamiyay laba jeer oo xiriir ah kasoo qeybgalka Champions League.
Si kastaba maamulka Inter Milan waxey doonayaan iney soo afjaraan dhibaatada ka heysata ku guuleysiga Scudetto, waxeyna saddex sano heshiis ah la galeen Antonio Conte sidey sheegayaan warar hoose.
La Gazzetta dello Sport ayaa qiraya in jimcada (berito) lagu dhawaaqi doono in Conte uu noqonayo tababaraha xiga ee Inter Milan.